Izixhobo ezi-5 EZIBALULEKILEYO kwi-aquarium yakho | Ngeentlanzi
Xa uqala kwihlabathi lee-aquariums kufuneka wazi ukuba kuya kufuneka uthenge izixhobo ezithile zentlanzi yakho. Ayithengi nje iintlanzi, i-aquarium kunye namanzi, kodwa uyakufuna uthotho lwe eyongezelelweyo ukuze yonke into isebenze ngokuchanekileyo. Kule posi siza kukubonisa ukuba ziyintoni na ezona zinto zilungileyo kwi-aquarium yakho ukuze uyazi kakuhle into oza kuyizuza.
Ukuba unomdla wokwazi iimpawu kunye nokusebenza kwezi zongezo, le yiposti yakho
Iingcebiso ngaphambi kokuthenga izixhobo
Ngaphambi kokungxamela ukuthenga kwiivenkile zeentlanzi okanye zezilwanyana, kufuneka uyazi kakuhle into efunekayo. Izidingo ze-aquarium nganye zahlukile, nangona zonke zinento efanayo. Ngoku ka iintlobo zeentlanzi oza kuzazisa, ubungakanani be-aquarium, izityalo zasemanzini, njl. Kuya kufuneka ezinye izixhobo okanye ezinye.
Into yokuqala yokwazi ziimfuno zentlanzi esiza kuba nayo kwi-aquarium. Ayifani ukuba neentlanzi zamanzi amatsha kuneentlanzi zetyuwa. Kwaye ayifani into yokuba neentlanzi zetropiki kunezinye ezivela kumanzi abandayo. Abanye baya kufuna izityalo zokwenyani kwaye abanye ngeplastikhi yokuhombisa baya kuba nakho ukuhlala kakuhle.
Yintoni abantu abaninzi abayenzayo xa bengena kweli hlabathi kukuthenga izinto ezingenakubalwa. Konke oku ukwandisa ubuhle. Nangona kunjalo, uninzi lwazo aludingeki kwaye ekugqibeleni luya kunciphisa indawo yokubhukuda yeentlanzi, ixesha lethu kunye, ewe, nemali.
Olona khetho lubalaseleyo xa kuziwa ekubeni nezixhobo kukuba i-aquarium ihlala icocekile kwaye icocekile. Ngaphandle koko, nokuba sinayo, kuya kubonakala ngathi ayinakekelwa kakuhle.
Eyona nto ifanelekileyo kwi-aquarium
Emva koko siza kubhala uluhlu lwezinto ezifunekayo kwi-aquarium kwaye iya kukunceda ukhathalele intlanzi. Zonke ezinye izincedisi zihombisile kwaye aziboneleli nganto iluncedo.
Isihluzi seNICREW se ...
Icebo lokucoca lwangaphakathi ICA OP600 ...
Akukho mveliso ifunyenweyozibalulekile kwi-aquarium. Kufuneka ubuncinci ibenye. Ngale ndlela siyaqinisekisa ukuba iimeko eziyimfuneko ziyagcinwa ukuze iintlanzi zihlale ziphila. Iifilitha Banoxanduva lokucoca amanzi entsalela eyenziweyo kwaye zihlala zidada.
Kubalulekile ukuba amanzi etanki yeentlanzi agcinwe ecocekile ukuze iintlanzi zibe sempilweni. Zikwasebenza ukuhluza izinto zebhayoloji. Oku kuthetha ukuba inkunkuma iguqulwa yenziwa ibacteria eluncedo kwintlanzi.
Zininzi iintlobo zeefilitha, kodwa ngokubanzi ezo zinazo ukuhluzwa kwebhayoloji, oomatshini kunye nemichiza. Ngolu hlobo lwecebo lokucoca ulwelo kwanele ukugcina i-aquarium ikwimeko elungileyo.
Olunye ukhetho olwahlukileyo kukuthenga izihluzi ngokwahlukeneyo. Olu khetho lubiza kakhulu kwaye lufuna ukugcinwa okungaphezulu. Nangona kunjalo, isinika inkululeko engakumbi ekukhetheni into esicinga ukuba iyimfuneko kwaye sinokutshintsha iyunithi enye ukuba iyekile ukusebenza.
Iintlanzi ezininzi zifuna amanzi afudumeleyo ukulinganisa iimeko zendalo ezihlala kuzo. Ezi zizinto ezifanelekileyo ukuba sifuna iintlanzi zibe sempilweni. Kukho iintlobo ezininzi zezifudumezi. Ezona zicetyiswayo zezona zinayo ulawulo lobushushu oluzenzekelayo. Ngale ndlela unokukhetha ubushushu obulungileyo iintlanzi ekufuneka zikubo kwaye uzigcine.
Into ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa Akukho mveliso ifunyenweyokukubona ukuba inokusebenza nenani lamanzi anayo kwi-aquarium yethu. Kuhlala kulukhetho olufanelekileyo ukuthenga enye enkulu ukuze ingafikeleli kwaye ayitshisi onke amanzi.
I-NICREW YENZA I-RGB + W 24/7…
I-NICREW yokuKhanya okuMhlophe kwe-LED ...
Ukukhanya kweSlimLED ...
Izibane zisetyenziselwa ukulinganisa ukukhanya kwelanga kwaye zikwanika ukubonakala okuphumelele ngakumbi kunye nobuhle bobuhle. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zezibane. Ukusuka kwimibhobho ye-fluorescent ukuya kwenye enemibala eyahlukeneyo, imicu ekhokelwayo kunye neziphatho zezibane.
Izibane azilandeli iphethini engqongqo, kuba ingumbandela wokungcamla. Ukufumanisa ukukhanya okufunekayo kukho ipateni ebonisa ukuba kufuneka isetyenziswe malunga nezibane ezingama-30 kwilitha nganye yamanzi.
Enye into ebalulekileyo ekukhanyeni ngumbala kunye nokuqina. Ukuba sinezityalo zendalo zasemanzini, siya kufuna ukukhanya okusinika ukukhanya kwendalo. Ukuqina okuphezulu akufani nokukhanya kwelanga, ngenxa yoko azisetyenziswa ngokubanzi. Ukuphakama kokukhanya kokukhanya, kokukhona ziya kukhula ngakumbi izityalo. Ngokuchasene noko, baya kukhula bade.
I-Tetra APS 50 Impompo ...
Ezi zizinto ezibekwe kwi-aquarium ekhonza ukonyusa umoya womoya kwaye, ngayo, Yandisa ixesha lokuphila kweentlanzi nezityalo. Iintlanzi kunye nezityalo zasemanzini zifuna inqanaba leoksijini enyibilikayo emanzini ukuze ziphile. Ngotshintsho lwamanzi, ukuhluza kunye nezityalo kunokwenzeka ukuba kuphefumle amanzi. Kodwa kukho amaxesha apho akwanelanga kwaye ndiyazi kufuneka iizithambisi.
Ukusebenza kwayo kulula. Batsala umoya kwi-aquarium ngendlela enokuthi ivelise amaqamza kunye nentshukumo yamanzi.
Icala elisezantsi kwezi zixhobo kukuba bafuna ulungelelwaniso olungqongqo ukuze basebenze kakuhle. Umoya ekufuneka ukhutshiwe kufuneka uphephe ukuphazanyiswa ziintlanzi okanye uphakamise iintsalela ezingcolisa amanzi.
Banika itanki yentlanzi imbonakalo yokuhombisa kwaye benze imeko ekholisayo emehlweni, ukudala imeko enobuhle obungaphezulu.
Uvavanyo lwenqanaba lesalathi samanzi
Idiskhi yokubonisa ngesandla ...
Nekano pool imitha pH...
PH iimitha, Preciva ...
Amaxesha amaninzi iintlanzi ziyafa kwaye akwaziwa ukuba kutheni. Nokuba unazo zonke izixhobo ezikhankanywe apha ngasentla, kuya kufuneka uyazi imeko yamanzi. Ngale nto kukho uvavanyo lwamanzi.
Iiparamitha zamanzi ezinjengexabiso le-pH (pH), ubunzima obupheleleyo (GH), ubunzima be-carbonate (KH), i-ammonium / ammonia (NH4 / NH3), i-nitrite (NO2), i-nitrate (NO3), i-phosphate (PO4) kunye nentsimbi (Fe) .
Ngezi mitha sinokwazi imeko yamanzi kwaye sazi ukuba awanele.
Ndiyathemba ukuba ngezi zincedisi unokufumana i-aquarium yakho ikwimeko efanelekileyo.
Ukucaciswa kwamanzi e-aquarium kuluncedo olukhulu ekugcineni amanzi acocekile kwaye ngaphandle koluvo ...
Uvavanyo lwe-Aquarium alucetyiswa kuphela, kodwa lunokuthathwa njengesinyanzelo ukugcina umgangatho wamanzi ...
I-CO2 yee-aquariums sisihloko esine-crumb eninzi kwaye ikhuthazwa kuphela kwezona ndawo zifuna amanzi zasemanzini, ukusukela ...
Kukho iitoni zemihombiso enezimvo ezigqwesileyo zokuhombisa i-aquarium, ukusuka ematyeni okanye kwizinti ukuya kumanani akudala ...
por UNatalia Cerezo yenzayo Iinyanga ze9 .
Iifilitha zobhaka lukhetho olufanelekileyo kwi-aquarium, enkulu okanye encinci, kwaye ayinamsebenzi ukuba ...
Iifilitha ze-AquaClear ziya kuvakala njengaye nabani na okhe wakho kwilizwe le-aquarium okwethutyana, kuba ...
Gcwalisa iikiti ze-aquarium ezifanelekileyo ukuqala ngazo, oko kukuthi, kubalandeli behlabathi lentlanzi kunye ...
Sele sitsho kwizihlandlo ezininzi ukuba eyona inzima, kunye neyona ibaluleke kakhulu, ngelo xesha ...
Isilungisi samanzi yinto eyimfuneko ekucoceni amanzi avela ngokuthe ngqo kwimpompo kwaye ayijike ...
I-aquarium siphoner sesinye sezixhobo ezisisiseko ukuze sikwazi ukwenza ulondolozo lwe-aquarium yethu kunye ...
Ithemometha ye-aquarium sisixhobo esisisiseko esinceda ukugcina amaqondo obushushu e-aquarium phantsi kolawulo ngokupheleleyo. A) Ewe…